आज २०७७ साउन ३ गते शनिबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- – Sanchar Patrika
आज २०७७ साउन ३ गते शनिबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
July 18, 2020 217
Nextसधै नेपाललाइ हे’प्ने भारत को दा’दागिरीको बि’रुद्द ओलीले दिए फेरी क’डा दनक [सक्दो शेयर गरौँ]
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? रेल्वे कम्पनीले माग्यो १ सय २९ कर्मचारी